Articles tagged 'platinum refinery'
Zim considers Implats refinery proposal 21 March 2014 HARARE - Zimbabwe is considering a platinum refinery construction proposal by South Africa-based Impala Platinum Holdings (Implats), businessdaily has learnt. Mines minister Walter Chidhakwa yesterday said he met Implats chairperson, Khotso Mokhele, this Wednesday to discuss the modalities of ...
Implats stock tumbles as Zim mulls platinum exports ban 15 January 2014 JOHANNESBURG - Platinum (Implats)' share price has dropped 10 percent on the Johannesburg Stock Exchange in the past week following investor concerns over threatened beneficiation requirements by Zimbabwean government on its unit Zimplats. This comes on the back of escalated pressure by Harare...
Zimplats considers loans for refinery 9 December 2013 HARARE - Impala Platinum Holdings Limited (Implats)'s local unit, Zimbabwe Platinum Mines (Zimplats), says it will consider offshore loans among a cocktail of measures — together with other platinum group metals (PGMs) producers — to secure funding for a refinery. This comes on the back of esc...
Zim dangles ownership for platinum refinery 1 December 2013 HARARE - Zimbabwe is willing to let foreign-owned platinum mining firms own majority shares in their local operations if they build a refinery in the country, the mines minister said on Thursday. The country has the world's second largest known platinum reserves but mining companies send the ...
Adequate power key for platinum refinery 27 November 2013 HARARE - Zimbabwe must have adequate power supply in order to fully realise the benefits of a platinum refinery, the Platinum Producers Association of Zimbabwe (PPAZ) says. This comes on the back of escalated efforts by government to have platinum processed locally with President Robert Mugabe...
Zim says miners 'deliberately' delay platinum refinery 23 November 2013 HARARE - Zimbabwe is in talks with private investors to build a $1 billion platinum refinery, after companies “deliberately delayed” construction, Mines minister Walter Chidakwa said. Chidakwa, who didn't identify the investors, also repeated a November 9 threat by President Robert Mugabe to h...
Zim needs $5,3bn for platinum expansion 22 October 2013 HARARE - Zimbabwe needs investment of as much as $5,3 billion and stable mining policies if it is to boost platinum output to a point where it can rival Russia as the world's second-biggest producer of the metal, an industry organisation said. To increase production to the more than 500 000 ou...